CO2 ho an'ny aquariums, inona no ilana azy ary nahoana no ilaina izany? | Ny trondro
CO2 ho an'ny aquarium dia lohahevitra iray misy potipotika betsaka ary natokana ho an'ireo aquarista mitaky be indrindra, satria ny fampidirana CO2 amin'ny aquarium misy antsika dia mety hisy fiantraikany amin'ny zavamaniry antsika ihany (na tsara na ratsy kokoa) fa koa ireo trondro.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka lalina isika momba ny atao hoe CO2 ho an'ny aquarium, manao ahoana ny kitapo, ahoana ny fikajiana ny habetsaky ny CO2 ilaintsika ... Ary koa, raha te handinika an'io lohahevitra io ianao, dia ampirisihinay koa ity lahatsoratra ity amin'ny Homemade CO2 ho an'ny Aquariums.
1 Inona no ilaina amin'ny CO2 ao anaty akondro
2 Manao ahoana ny kitapo aquarium CO2
2.1 Kit anatiny
3 Mandra-pahoviana ny tavoahangy CO2 ho an'ny aquarium?
4 Ahoana ny fandrefesana ny habetsahan'ny CO2 ao anaty aquarium
4.1 Fomba fampianarana
4.2 Fomba mandeha ho azy
6 Misy soloana CO2 ao anaty akarium?
Inona no ilaina amin'ny CO2 ao anaty akondro
CO2 dia iray amin'ireo singa fototra indrindra amin'ny akondro aquarium, satria tsy misy izany dia ho faty ny zavamaniry anao, ary, farafaharatsiny, marary. Izy io dia singa iray tena ilaina ampiasaina amin'ny fotosintesis, mandritra izay dia ampiarahina amin'ny rano sy hazavan'ny masoandro ny CO2 mba hitomboan'ny zavamaniry. Amin'ny alalàn'ny fihemorana dia mamoaka oksizenina izy, singa fototra iray hafa hiantohana ny fahavelomana sy fahasalamana tsara ao amin'ny aquarium anao.
Ao anatin'ny tontolo artifisialy toy ny aquarium dia tsy maintsy manome ny zavamaniry otrikaina ilain'izy ireo isika na tsy hivoatra tsara izy ireo. Noho io antony io, ny CO2, izay zavamaniry voajanahary dia mazàna avy amin'ny fotaka sy zavamaniry simba hafa, dia tsy singa iray be dia be ao anaty aquariums.
Ahoana no ahafantarantsika raha mila CO2 ny aquarium antsika? Araka ny ho hitantsika etsy ambany, dia miankina betsaka amin'ny habetsaky ny hazavana horaisin'ny aquarium: arakaraka ny hazavana no ahazoana ny zavamaniry anao.
Manao ahoana ny kitapo aquarium CO2
Misy fomba maro hampidirana CO2 ao anaty rano anaty ranomasina misy anao. Na dia misy fomba tsotra vitsivitsy aza, izay horesahintsika avy eo, ny zavatra mahomby indrindra dia ny fananana kit izay manampy karbonina amin'ny rano matetika.
Fonosana 3 cylinders...
Tsy misy isalasalana, ny safidy tena tolo-kevitr'ireo aquarists dia kitapo CO2, izay mamokatra tsy tapaka ny gazy ity, ka azo atao tsara ny mampanjohy tsara hoe ohatrinona ny CO2 miditra ao anaty aquarium, zavatra izay hankafizin'ny zavamaniry sy ny hazandrano anao. Ireto ekipa ireto dia misy:
Tavoahangy CO2. Izany indrindra no, tavoahangy misy ny lasantsy. Arakaraka ny maha lehibe azy no haharetany (lojika). Rehefa vita dia tsy maintsy refesina ohatra, miaraka amin'ny varingarina CO2. Ny fivarotana sasany dia manolotra anao ity serivisy ity.
Regulator. Ny mpandrindra dia manompo, araky ny anarany, manara-maso ny tsindry amin'ny tavoahangy misy ny CO2, izany hoe mampidina azy mba hahafahany mitantana kokoa.
Diffuser. Ny "diffuser" dia "mamaky" ireo vongana CO2 alohan'ny hidirany ao anaty aquarium mandra-pahatonga azy ireo hamorona zavona manify, amin'izay dia zaraina tsara kokoa manerana ny aquarium. Amporisihina mafy ianao hametraka ity sombin-javatra ity amin'ny fivoahan'ny rano madio avy amin'ny sivana, izay hanaparitaka ny CO2 manerana ny aquarium.
Fantsona mahatohitra CO2. Ity fantsona ity dia mampifandray ny mpandrindra amin'ny diffuser, na dia toa tsy zava-dehibe aza izy io, ary tena tsy azonao ampiasaina, satria tokony ho azonao antoka fa mahatohitra CO2.
Solenoid. Ankoatry ny fananana anarana tena milay izay mizara ny lohateny amin'ny tantara nosoratan'i Mircea Cartarescu, ireo solenoida dia fitaovana tena ilaina tokoa, satria izy ireo no miandraikitra ny fanidiana ny valizy manome lalana ny CO2 rehefa tsy misy hazavana intsony (amin'ny Ny zavamaniry amin'ny alina dia tsy mila CO2 satria tsy photosynthesize). Mila fameram-potoana izy ireo vao hiasa. Indraindray ny solenoida (na ny timer ho azy ireo) dia tsy tafiditra ao anaty kitiona akondro aquarium CO2, noho izany dia ampirisihina mafy ianao mba hizahanao antoka fa ampidirin'izy ireo izany raha maniry hanana iray ianao.
Kaontera bubble. Na dia tsy ilaina aza izy io, dia mamela anao hifehy tena amin'ny fomba mahomby kokoa ny habetsaky ny CO2 izay miditra ao anaty aquarium, satria manao an'izany fotsiny izy, manisa ireo bolongana.
Drip checker. Ity karazan-tavoahangy ity, tsy tafiditra ao anaty kitapo sasany, manamarina ary manondro ny habetsaky ny CO2 izay ao anaty akarium anao. Ny ankamaroany dia manana ranoka manova loko arakaraka ny hoe ambany na marina na avo ny fatrany.
Mandra-pahoviana ny tavoahangy CO2 ho an'ny aquarium?
Ny marina dia hoe somary sarotra ny milaza amin-toky hoe mandra-pahoviana ny tavoahangy CO2 maharitra, satria miankina amin'ny vola apetrakao ao anaty aquarium, ary koa ny fahita matetika, ny fahaiza-manao ... na izany aza, heverina fa ny tavoahangy iray litatra eo ho eo dia mety haharitra eo anelanelan'ny roa sy dimy volana.
Ahoana ny fandrefesana ny habetsahan'ny CO2 ao anaty aquarium
Ny marina dia hoe tsy mora mihintsy ny manao kajy ny isan-jaton'ny CO2 ilain'ny aquarium antsikasatria miankina amin'ny lafin-javatra maro. Soa ihany fa eo ny siansa sy ny haitao hamoahana ny chestnuts amin'ny afo indray. Na izany aza, mba hanomezana hevitra anao dia hiresaka momba ireo fomba roa izahay.
Voalohany indrindra, hampianatra anao ny fomba fanao amin'ny tanana izahay mba hikajiana ny habetsahan'ny CO2 ilainao aquarium. Tsarovy izany, araka ny efa nolazainay, ny refy ilaina dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, ohatra, ny fahaizan'ny aquarium, ny isan'ny zavamaniry nambolenao, ny rano izay karakaraina ...
populaire tsy maintsy kajinao ny pH sy ny hamafin'ny rano hahafantarana ny isan-jaton'ny CO2 izany dia ao anaty rano amin'ny aquarium anao. Amin'ity fomba ity dia ho fantatrao hoe firy isan-jaton'ny CO2 ilainao manokana ny aquarium. Azonao atao ny mahita fitsapana hikajiana ireo sanda ireo any amin'ny magazay manokana. Ampirisihina ny isan-jaton'ny CO2 eo anelanelan'ny 20-25 ml isaky ny litatra.
Avy eo dia tsy maintsy ampianao ny CO2 ilain'ny rano aquarium (Raha misy ny tranga dia mazava ho azy). Mba hanaovana izany dia kajio fa manodidina ny folo eo ho eo ny bubble CO2 isaky ny rano 100 litatra.
Fomba mandeha ho azy
Raha tsy misy fisalasalana, ity no fomba tena ahazoana aina indrindra raha hikajiana raha marina na tsia ny habetsahan'ny CO2 misy ao anaty aquarium misy antsika. Ho an'ity dia mila tester isika, karazana tavoahangy vera (izay mifono amina kaopy suction ary miendrika lakolosy na bubble) misy ranoka ao anatiny izay mampiasa loko isan-karazany hampahafantarana ny habetsahan'ny CO2 misy ao anaty rano. Raha ny mahazatra dia mitovy hatrany ny loko hanondroana izany: manga ho an'ny ambaratonga ambany, mavo ho an'ny haavo avo ary maitso ho an'ny ambaratonga idealy.
Ny sasany amin'ireto fitsapana ireto dia hangataka aminao mba hampifangaro ny rano aquarium amin'ny vahaolana, raha amin'ny hafa kosa tsy ho ilaina izany. Na ahoana na ahoana, araho hatrany ny torolalan'ny mpanamboatra anao mba tsy hampatahotra anao.
Somary sarotra ny olan'ny CO2 amin'ny akerarium, satria mila faharetana, kitapo tsara ary vintana maro aza. Izany no antony nanomananay lisitry ny torohevitra izay azonao raisina rehefa miditra amin'ity tontolo ity ianao:
Aza mametraka CO2 be loatra indray mandeha. Tsara kokoa ny manomboka miadana sy miakatra ny haavon'ny karbaona anao tsikelikely, mandra-pahatonganao any amin'ny isan-jato tadiavina.
Mariho fa, arakaraky ny andehanan'ny rano (noho ny sivana, ohatra) no mahabe ny CO2 ilainao, satria hifindra alohan'ny rano akondro izy io.
tokoa tsy maintsy manao fitsapana maromaro amin'ny rano ao anaty aquarium ianao mandra-pahitanao ny tahan'ny CO2 mety indrindra ho an'ity. Noho izany dia ampirisihina mafy ianao mba hanao ireo fitsapana ireo nefa tsy mbola misy trondro, amin'izay dia tsy hampidi-doza azy ireo ianao.
Farany, raha te hitahiry CO2 kely ianao, vonoy ny rafitra adiny iray alohan'ny hamonoana ny jiro na ho maizina dia ho ampy ny sisa tavela ho an'ny zavamaniry ary tsy holaninao izany.
Misy soloana CO2 ao anaty akarium?
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny safidin'ny kitapo hanaovana CO2 an-trano no tsara indrindra ho an'ireo zavamaniry ao anaty akeranao anefa, satria safidy somary lafo sy sarotra io, dia tsy voatery ho ny olona rehetra foana no mety matetika. Amin'ny maha mpisolo toerana antsika dia afaka mahita ranon-javatra sy pilina isika:
Ny fomba mora indrindra manampy CO2 amin'ny aquarium anao dia manao azy amin'ny fomba ranoka. Ny tavoahangy misy an'ity vokatra ity dia misy an'io fotsiny, karbaona marobe (izay refesina matetika miaraka amin'ny satrony tavoahangy) amin'ny endrika ranon-javatra izay tsy maintsy ampidirinao amin'ny rano aquarium anao indraindray. Na izany aza, tsy fomba azo antoka izy io, satria ny fifantohana CO2, na dia levona ao anaty rano aza indraindray tsy miparitaka. Ho fanampin'izay, misy ireo izay milaza fa manimba ny hazandranony izany.
Mety mila kojakoja misaraka ihany koa ny takelaka, satria, raha apetraka mivantana ao anaty aquarium izy ireo dia mianjera vetivety fa tsy manao azy tsikelikely, ka dia tsy misy ilana azy ireo intsony ny zavamaniry ary mamela tahiry izay afaka mijanona ho an'ny fotoana vitsivitsy. any aoriana. Na izany aza, misy safidy tsotra kokoa izay amboarina amin'ny rano fotsiny ilay vokatrana izany aza, mety tsy ho rava tsara izy ireo.
Aquarium CO2 dia lohahevitra sarotra izay mitaky kit sy matematika mihitsy aza hahitana ny tahan'ny mety ary hitombo ara-pahasalamana ny zavamaniry anay. Lazao aminay, manana aquarium nambolena ve ianao? Inona no ataonao amin'ireto tranga ireto? Moa ve ianao mpankafy mpiorina CO2 an-trano bebe kokoa sa tianao ny ranoka na pilina?
Fuentes: Zaridaina Aquarium, dennerle
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » CO2 ho an'ny aquarium